‘गृह’ – Janaubhar
प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख २९, २०६८ | 136 Views ||
अहिले दुनियाँलाई चिन्ता छ त ‘गृह’कै छ । सरकारमा केही लफडा छ त ‘गृह’कै । किचेनदेखि किङ्डमसम्म, सर्वहारावर्गदेखि पूँजीपतिवर्गसम्म, राष्ट्रपतिदेखि श्रीमतीका पतिसम्म सबैलाई छ त केवल ‘गृह’कै सुर्ता छ । हैन यो ‘गृह’मा के त्यस्तो मह लागेको छ र सबै ‘गृह’कै पछि-पछि कुदेका छन् ।
गृह अर्थात् घर ।
अहिले सबैतिर घरकै लागि झगडा छ भन्दिए फरक नपर्ला । अरु त के हिजो व्यक्तिगत सुख, सयल र सम्पत्ति नै केही चाहिदैन भनि घर छोडेर जङ्गल पसेकाहरु त अहिले घरका लागि तँ तँ र म म गर्छन् भने अरुका के कुरा गर्नु ? हिजो सुख, सयल र सम्पत्ति सबै पार्टीलाई बुझाएर जङ्गल पसेकाहरु नै आज कोही घर ठड्याउन व्यस्त छन्, कोही घर किन्न त कोही घर बनाउने घडेरी जम्मा गर्नमै अस्तव्यस्त छन् । त्यतिमात्र भए त हुने नि, घर छोडाउने अभियानका अगुवाहरु नै अहिले हुँदा-हुँदा चिठ्ठावाल झल्लुले दिएको घरका लागि गर्नु-नगर्नु केही बाँकी राखेनन् । हिजो कानमा लगाएका सुनसमेत पार्टीमा बुझाउनेहरु आज घरमन्त्रालयका लागि दुनियाँका अगाडि अच्छै रमिता देखाए/अझ देखाउँदैछन् ।
उता झल्लुनाथको घरपट्टि पनि कम्ति रडाको र रामरमिता चलेको छैन आजकल । घर जंगलीलाई दिए हामी कहाँ बस्ने भन्दै झल्लुनाथकै चुलेहरुले उनको टाउको आधा आधी खाइसकेका छन् । जंगलीलाई घर दिए हामीलाई जंगल लखेट्छन् भन्ने डरले पिरोलिएका घरवालीहरु अहिले आफ्नो भएको झुपडी (पार्टी) पनि भत्काइदिने धम्की दिइरहेका छन् । विचरा झल्लुनाथलाई भने ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाऊको अन्वार’जस्तै भएर घर हात लगाइदिए ‘जङ्गली’हरुलाई । हिजो घर नपाउँदाको किचलोभन्दा अहिले घर पाइसकेपछिको किचकिचले जङ्गलीहरुको छाँटकाँट पनि राम्रैसँग देखिसकेको छ । घर दिएपछि राम्रोसँग कोठा-चोटा बाँडेर मिलेर बस्नु त कहाँ हो कहाँ ? घर कसको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने रडाको पो मच्चाउँदैछन् ।
खैर, जे होस् झल्लुनाथको घरपट्टिमा जंगलीलाई घर दिएकाबारेमा लफडा पर्‍यो, जंगलीका घरपट्टिमा लफडा पर्‍यो- घरको कसको नाउँ भन्नेमा । आखिर बिचरा जंगलीहरु पनि यतिका दिनसम्म जंगलमा धेरै चिसो भयो होला, आँधी हुरी, असिना पानीले चुट्यो होला राम्रो घरमा कसलाई पो बस्न मन लाग्दैन र, त्यसैले लुछाचुँडी भएको होला । अब बाँडीचुँडीका दिन त गए । हैन र वैद्य जी ?
Posted in सुलसुलेको सुइँको
Nextखर्सुका रुखमुनि रेडियो स्टेशन